Last updated: Chivabvu. 18 2019 | 1
Tinoziva zvakakosha kwauri kuti uchengete munharaunda yedu vakachengeteka, saka isu taida kupedza nguva shoma kuti uzive paIndaneti vakachengeteka.
Tevera izvi shoma nyore Check pfungwa uye uchava nacho muhomwe!
Mavara echivande vanofanira kuva nyore kuyeuka nemi, asi nesimba munhu zvokufungidzira. Mazita zviri nyore kuyeuka, asi sezvinoita nyore kuti yokunzvera maziso zvokufungidzira!
Date My Pet ane zvinoshamisa nhengo mameseji hurongwa. Usamhanye kupa kuzotaura mashoko kusvikira wagadzirira uye vanzwe vakasununguka. Musarega munhu kukutsausa. Tora izvozvo panguva kumhanya kwako uye kufara.
Kana munhu ari panzvimbo anokumbira kuti kukwereta mari, aramu mabhero vanofanira kutanga kungorira. Usapa mumwe musi mari nzvimbo, zvisinei chakanaka sei chikonzero sokuti kuva. Please dzinoshuma chero nhengo anokumbira kuti mari yedu Support Team ndiani vachafara kuongorora.
Chinonyanya kukosha ndechokuti nguva dzose unofanira kugara kudzora. Meet vari padare, udza mumwe munhu kana kupi uri kuenda, uye ronga kuti avaidze panguva yakapiwa nguva ngaadarowo kuenda zvakanaka. Kana zuva rako wakafanirwa, vachada zvachose kunzwisisa.
Ruzhinji rwevanhu wasangana paIndaneti vachava vanhu zvechokwadi sezvinongoita iwe, vari kungoti kutsvaka zuva kana vamwe ushamwari. Chero bedzi imi kutevera yendarama mitemo uye zvichengetedze – tiri chokwadi uchava unakidzwe!
yeuka, Date My Pet haazombofi kukutumirai chero e-mail kukumbira chero munhu mashoko.
3 Tips kukuita Akakwana Chick Magnet!
Ita uye Nezvokusaita On Kuita First Dating Introduction